पत्रकार हत्याका अभियुक्तको बचाउमा प्रधानमन्त्री! – Media Kurakani
January 8th, 2013 Media Kurakani Media News
दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका अभियुक्तहरुले चरम यातनापछि थापालाई ज्यूँदै गाडेको साविती बयान दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उनीहरुको बचाउमा औपचारिक रुपमा मुख खोलेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पत्रकार हत्याका अभियुक्त पक्राउ परेको घटनाप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।
दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका अभियुक्तहरुले चरम यातनापछि थापालाई ज्यूँदै गाडेको साविती बयान दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उनीहरुको बचाउमा औपचारिक रुपमा मुख खोलेका छन् । पुस २४ गते मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले पत्रकार हत्याका अभियुक्त पक्राउ परेको घटनाप्रति गम्भीर असहमति जनाए ।
प्रधानमन्त्रीले कथित मानवअधिकारवादीको आडमा डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका आरोपितलाई पक्रेकोले सरकारले यो कदमलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताए । युद्धकालका घटनामा मुद्दा नचलाउने विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरित मानवअधिकारवादीको उक्साहटमा उनीहरु पक्राउ परेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।
उनीहरुको पक्राउमा राज्यको संलग्नता नभएको र सरकारी नीति अनुसार आरोपी पक्राउ नपरेको पनि प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पारे ।
भट्टराई राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका गोरखाका राजेन्द्र ढकालकी छोरी मञ्जिमा ढकालले लेखेको पुस्तक ‘राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा राजेन्द्र ढकालः सम्मान र सम्झना’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै थिए ।
२०६१ साल साउन २७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले थापाको हत्या गरेका थिए ।
मंसिर २१ गते पक्राउ परेका अभियुक्तले दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई ज्यूँदै गाडेर हत्या गरेको सरकारी वकिल समक्ष बयान दिएका थिए । पक्राउ परेका ५ जना अभियुक्त मध्ये लक्षीराम घर्तिले जिल्ला पार्टी हेडक्वार्टरको निर्देशन बमोजिम कुटेर बेहोश बनाएपछि गाडेको बताएका थिए ।
दैलेखमा थापा हत्याका अभियुक्तहरुमाथिको कारबाही रोक्न एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा माओवादीले दवावदिएका छन् ।
यसो भने प्रधानमन्त्रीलेः
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग मार्फत द्वन्द्वकालका सबै घटनाको छानबिन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र मेलमिलापको तरिकाले विधिवत ढंगले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न जारी छ । तर द्वन्द्वकालका घटनाको विषयलाई लिएर कथित मानवअधिकारवादीहरुले उक्साएर फेरी गिरफ्तारीका श्रृंखला अगाडी बढाउने र झुटा मुद्दामामिला लगाएर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्ने यस्ता घटनामा सरकारको कुनै साइनो र सहमति छैन । देशभित्र, खासगरी, दैलेखमा द्वन्द्वकालमा भएको घटनालाई लिएर फेरी मुद्दामामिला लगाउने जुन प्रयत्न भएको छ, यो शान्ति प्रकृयालाई बिथोल्ने भाँड्ने प्रयत्न हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । जानेर वा नजानेर कसैले यस्तो गल्ती कमजोरी गरेको छ भने हामी त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्छौँ । यस्ता घटनामा नेपाल सरकारको कुनै किसिमको संलग्नता छैन, हुन सक्दैन ।
नेपाल अन्तरिम संविधान र वृहद शान्ति सम्झौताबाट निर्देशित छ । अन्तरिम संविधान र वृहद शान्ति सम्झौताले २०५२ साल देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म भएका घटनाको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले त्यसको छानबिन गरेर टुंगो लगाउने हो । त्यो विषयहरुमा कुनैपनि अदालतमा मुद्दामामिला चल्दैन । यो अहिलेको यथार्थ हो । यसलाई बिर्सेर अन्तरिम संविधान र वृहद शान्ति सम्झौताको भावना विपरित कसैले एउट एउटा मुद्दा टिपेर मुद्दा लगाउने प्रयत्न गर्छ भने यसले शान्ति प्रकृयालाई बिथोल्नेमात्रै काम गर्छ । यो अन्तरिम संविधान र वृहद शान्ति सम्झौताको वितरित हो ।
हिमालखबर, फेक ट्वीटर र हल्लाकारिता »
« डेकेन्द्रको सम्झनामा